What ICLOUD uyahlehla
Kumele ube ukwaziswa ezibalulekile kwi-iPhone yakho, iPad, and iPod touch, like izivumelwano, Amanothi, imiyalezo, izithombe nokunye. ICLOUD, okuyinto a isitoreji ifu, it ngokuzenzakalelayo uyahlehla idivayisi yakho phezu Wi-Fi nsuku zonke lapho ivulwa, sivaliwe, futhi ixhunywe umthombo amandla. With ulwazi usekelwe ku ICLOUD, wena kalula udlulise amafayela abezindaba kanye nedatha lokusebenza noma iyiphi idivayisi, noma buyisela ulwazi obalulekile kolunye kuwe vele unayo.
Nakhu ICLOUD ncamashi uyahlehla:
Umculo othengwe, Amabhayisikobho, TV, Izinhlelo zokusebenza, namabhuku
Unake, ICLOUD wakho isipele ihlanganisa ulwazi mayelana nokuqukethwe uthenge kuphela, kodwa hhayi okuqukethwe ethengiwe ngokwayo. Isibonelo, Uma ufaka ubuyisele kusukela isipele ICLOUD, okuqukethwe kwakho ithengwe ngokuzenzekela kulayishiwe kusuka Store iTunes, App Store, noma iBookstore esekelwe iTunes. Futhi ukuthenga owedlule zingase zingatholakali uma kubuyiselwe noma engasekho etholakala esitolo.
Izithombe namavidiyo ku Camera wakho Roll
Isikrini sasekhaya kanye lokusebenza inhlangano
iMessage, Umbhalo (SMS), kanye MMS imiyalezo
IOS wakho idivayisi yokusekelayo ubandakanya idatha kanye nezilungiselelo egcinwe efonini yakho kuphela. It akubandakanyi idatha kakade egcinwe ku ICLOUD, isibonelo othintana, amakhalenda, amabhukumaka, mail imiyalezo, Amanothi, okwabelwana photo stream, futhi imibhalo wena ugcine ku ICLOUD besebenzisa iOS zokusebenza and Mac zokusebenza.
Funda indlela ukwenza isipele iPhone yakho usebenzisa i-iCloud.
Posted on September 27, 2013 November 24, 2015 Umbhali WillIzigaba Amathiphu & NamaqhingaAmathegi ICLOUD uyahlehla, yini ICLOUD emuva up, yini isipele ICLOUD on iPad
Langaphambilini post Previous: Indlela ukusekela iPhone yakho, iPad, iPod Touch ngekusebentisa iTunes
Next post Next: Indlela ukusekela nokubuyisela iPhone yakho, iPad, iPod Touch besebenzisa ICLOUD